Hordhac: Arsenal vs. Crystal Palace - Gunners Oo Guushii Afraad Oo Xidhiidh Ah Raadinaysa, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey | Laacibnet.net
Hordhac: Arsenal vs. Crystal Palace – Gunners Oo Guushii Afraad Oo Xidhiidh Ah Raadinaysa, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey
Arsenal ayaa raadin doonta guushii afraad oo xidhiidh ah ee ay kasoo hoyso horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo October 2018kii, marka ay caawa garoonka Emirates Stadium kusoo dhoweeyaan Crystal Palace.
Gunners ayaa ugu dambayn kusoo laabatay jidka guulaha, iyadoo durba illoobaysa in Mikel Arteta uu hore culays u saarnaa, isla markaana uu qarka u saarnaa in shaqada laga caydhiyo, laakiin Crystal Palace ayaa iyaduna ku dhibaatoonaysa inay joogtayso bandhiggeeda marba dhinac u dhacaya.
Guushii ay Arsenal kasoo gaadhay Chelsea maalintii Boxing Day ayaa illaa hadda ay sii waddaa, waxaana ay kaddib soo garaacday Brighton iyo West Bromwich Albion, waxaase afar ugu ah Newcastle United oo ciyaar ka tirsanayd FA Cup oo waqti dheeraad ah lagu daray ay ku dhufatay 2-0.
Saddexda guulood ee xidhiidhka ah ee hore ee horyaalka, waxay Arsenal kusoo gashay kaalinta 11aad, blase waxay caawa fursad u haysataa inay sare uga soo kacdo oo ay ka mid noqoto tobanka kooxood ee ugu sarreeya.
Dhinaca Crystal Palace waxay usbuucan horraantiisii soo afjartay shan ciyaarood oo guulo la’aan ahaa, iyagoo 2-0 ku jiidhay Sheffield United.
Ciyaarta: Arsenal vs Crystal Palace
Thomas Partey kama soo muuqanin safka Arsenal tan iyo bishii December, laakiin laacibkan khadka dhexe ayaa la filayaa inuu ciyaaro caawa amaba ugu yaraan uu soo fadhiisto kursiga kaydka.
Arteta ayaa isbeddel badan sameeyey kulankii Newcastle United, waxaana la filayaa inuu dib usoo ceshado shaxdii uu kula ciyaaray West Brom toddobaad ka hor. Taas ayaa ka dhigan in Emile Smith Rowe uu fursad u haysto inuu kusoo bilowdo khadka dhexe ee weerarka xiga, halka Alexandre Lacazette iyo Aubameyang ay kusoo wada bilaaban doonaan.
Gabriel Martinelli ayaan loo xaqiijinin muddada uu ku maqnaanayo dhaawac cusub oo haleelay.
Crystal Palace waxa ka maqan Mamadou Sakho iyo Martin Kelly, waxaana sidoo kale uu shaki ku jiraa Scott Dann iyo Gary Cahill, taasina waxay keeni doontaa iyo Cheikhou Kouyate uu difaaca dhexe kusoo bilowdo.
Luka Milivojevic oo shan gool oo horyaalka ah kasoo dhaliyey Arsenal ayaa hoggaamin doona safka weerarka, inkasta oo uu jabiyey sharciga xakamaynta fayraska Korona oo laga yaavo in la ganaaxo.
Xiddiga Cusub Ee Arsenal U Beddelaya Mesut Ozul Oo Ka Gudbay Tijaabada Caafimaadka & Waqtiga Uu Soo Gaadhayo Emirates Stadium
Man United Oo Saxeexa Weeraryahan Kooxo Waaweyn Ku Garaacaysa, Arrimaha Odegaard Ee Arsenal & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa